Indawo yokulala yasegumbini - iphepha lodonga, ifenisha, ama-chandeliers ngaphakathi
Ikamelo eliphezulu eliphezulu - zonke izicabha zokulula zanamuhla
Amafomu aqinile kanye nokuntuleka kokuhlobisa kunesidingo sokuphumula ekamelweni elincane, lapho ikamelo lokulala eliphezulu likhona khona. Enkonzweni yendlu yikamelo eliwusizo futhi elihle, elihlomele ngokuphelele ukuphumula kusukela ekukhathazeni usuku nosuku nokulala.
I-high tech tech design design
Kunombono wokuthi ikamelo lokulala eliphezulu ne-minimalism yalo lihlangene kabi nomoya wokujabula nokunganaki okubangela isimo sokuphumula okufanele sibuse ekamelweni elihloselwe ukulala. Lo mbono uphakanyiswa yiqiniso lokuthi ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bamuva, ama-high-tech amafulethi athola izinhliziyo zabalandeli futhi avule izikhwama zabo. Amakamelo okulala ayingxenye yendlu yokuhlala yesizukulwane esisha.
Izici eziyinhloko zesikhombisi se-high tech zihlanganisa izici ezilandelayo:
Umklamo wekamelo lokulala eliphezulu usebenzisa i-smoky ezolile noma i-anthracite shades of gray. Ukuhlanganiswa kwemibala ye-domino kusetshenziswa kakhulu. Imiklamo eqinile yefenisha isebenzisa insimbi nesilazi, ezijabulisa abantu, abazithandayo abazakhele ezikhathini zanamuhla. Izici zokuhlelwa kwamafulethi ezimisweni zobuchwepheshe zisamangalisa, njengoba izitshalo ezishintshayo zanamuhla zingashintsha ukucushwa kwekamelo ngokuhambisa izindonga futhi zilungise ukukhanyisa kwimodi oyifunayo.
I-high-tech ekamelweni lokulala
Umklamo wangaphakathi uqala ngokukhetha imibala yezindonga. Umklamo wekamelo ekwakhekeni kwezindlela zobuchwepheshe kunqunywe ekuhlanganiseni okumnyama kwe-ultramarine kanye ne-indigo. Ungalaleli isiqondiso nethoni yokukhanya. Konke okufanayo kubusa izinga elimhlophe, elivunyelwe kuzo zonke izinhlobo ezivela ku-pearl shades kuya kwi-anthracite. Kubalulekile ukuthi kuvumelane nemininingwane emnyama bese kukhishwa izici ezimhlophe eziyisisekelo salesi siqondiso. Kungcono ukukhetha amaphephadonga ku-monophonic, kodwa okuhlukile kwendawo kungagcizelelwa ngokudweba ngokulingisa ngamatshe, isitini noma insimbi.
Kunezinhlobo eziningi zephepha lodonga:
kusuka emicimbini yemvelo;
ukuqeda ugesi omile.
Uma ukhetha iphepha lodonga, kufanele ugijime kuma-sampuli aqinile futhi anganelisi umswakama, kanye nokunethezeka kokunamathela ezindongeni nokunakekelwa okulandelayo.
Okokuqala, udinga ukubheka isimo odongeni, uma isimo siphelele, amasampula afanelekile wokuthungwa okubukhali noma obucwebezelayo. Uma izindonga zingekho esimweni esiphelele, kungcono ukugembula kumamodeli nge-embossing noma ngokuthungwa okuthile. Izosiza ukufihla iphepha elincane le-vinyl lodonga elincane.
Amakhetheni wekhamera eliphezulu eliphezulu
Ukuqedela ukuhlukaniswa nokuvikelwa ekukhanyeni noma ekubukeni okungajwayelekile kwabantu abadlulayo, amakhethini ekamelweni lokubeka isitayela esiphakeme kuyadingeka. Bamba iqhaza ekwakhiweni kwegumbi futhi kumele bahambisane nokuklanywa kwekamelo. Ikhefu le-hi-tech liyadingeka ukuhambisana nezici ezilandelayo:
ukungabikho kwamapulangwe athambile nobuhle;
izinto eziphathwe nge-sunscreen kanye nezingxenye eziluhlaza.
Lezi zimo zihambelana nezimpumputhe eziqondile nezizungezile , zenziwe ngezinto ezihlukahlukene (ipulasitiki, insimbi, ehlanganiswe nesakhiwo esiyingqayizivele), enezingxube zobubanzi obuhlukene nezinqubo ezivulela ukuvala noma ukuvala ikhethini. Ngokuvumelana nomklamo wekamelo lokubukeka ukuguqulwa kwegumbi lokulala kanye nezinguqulo ezakha i-cascade.
Amakhetheni ekamelo lokulala ngesitayela se-tech
Ingaphakathi lekamelo lokulala eliphezulu eliphezulu ligcwaliswa ngokusetshenziswa kwamakhethini kuma-eyelet noma emagumbini. Lezi zinto zikhethiwe kakhulu, ukuze ukukhanya kuphelele futhi ukukhanya akuphazamisi ukulala, futhi uma kukhona i-TV ekamelweni lokulala, akuyikudala i-glare esikrinini. Ngaphezu kwalokho, amakhethini emafasiteleni enza isimo esimnandi futhi sikhululekile, okukhulisa umqondo wokuphepha. Uhlelo lombala lukhethwa ngokugcina izingcingo zomqulu ezihambelana nezinye izingxenye ekamelweni. Ikamelo lokulala eliphezulu lingase lidinge ukusetshenziswa kwemikhakha emhlophe, emhlophe namnyama, kodwa imibala emnyama yombala ohlaza okwesibhakabhaka ne-burgundy ingasetshenziswa.
I-Chandelier ekamelweni lokulala eliphezulu
Ukuhlelwa kokukhanya kungenye yezinto ezibalulekile zokuklama. Isitayela se-tech ngaphakathi kwekamelo lokulala libandakanya ukusetshenziswa kwamakhila ensimbi nesilazi. Ukulula okulula kwezinto ze-geometric ukuguqulwa kuyisihluthulelo semisebenzi eminingi. Amakhansela angenziwa ngendlela yombuthano, isikwele noma uhlangothi, kanye nezinguqulo ezigobile. Ubuchwepheshe bemishini yokukhiqiza ikuvumela ukuba ulungise ukukhanya kokukhanya.
Ngesitayela se-high tech kukhona ukuthambekela kokusebenzisa izibani zezimboni. Leli fomu liphelele kangangokuthi kunezinhlobo eziningi ezikhethwa kukho. Thola izintandokazi ezifanele zabanikazi bokuguqulwa akulula. Ukumiswa kukhona nanokuhluka okuncane noma okukhulu. Amanye amadivaysi okukhanyisa akuvumela ukuba ukhethe inani lokufaka okudingekayo esimweni esithile.
Sconce ne-high-tech yokulala
Ukuze uphumelele ekukhetheni isibani ukuze uthole induduzo enkulu, kufanelekile ukunaka indawo enhle yedivayisi. Imiklamo encane ngokugxila ekusebenzeni igcizelela isitayela ekamelweni. Indawo yekamelo inganquma imodeli yendawo yokukhanyisa, ngakho-ke ikamelo lokulala eliphansi eliphezulu lizodinga ukusetshenziswa kwezinhlobonhlobo zasodongeni, nekamelo elibanzi lamatje okushisa.
Izikhanyiso zikhethwa ngosayizi ofanelekile nokuklama. Ukuze kube nesitayela esincane, izikhala, izibani zombhede nezibani zokukhanya, ezenziwe ezimhlophe, ezimnyama noma ezimpunga, zifanelekile. Amamodeli alula kakhulu angahle aqondiswe ngesikhala ngokuthanda futhi asebenzise kunoma iyiphi indlela. Amadivaysi okukhanyisa anganika igumbi uhlamvu nobuntu.
I-closet ekamelweni eliphezulu ngesitayela se-tech
Izindwangu ezinkulu zisetshenziselwa cishe zonke izindlu zokulala. Mayelana ne-cloakroom, ehlala egumbini elihlukile, abantu abaningi bangaphupha kuphela. Ifenisha yegumbi lokulala endlini yesitayela esiphezulu njengengxenye ebalulekile igqoke ikhabethe elakhelwe ukuze i-minimalism ingakhuliswa yizinto ezinzima. Izinketho ezifakiwe zingakwazi ukufaka inani elikhulu lokugqoka. Ukuze ugweme ukudideka, zihlonywe ngamakamelo ahlukene okugcina izigqoko zangaphansi, izibopho, amabhulukwe nezingubo.
Umbhede ekamelweni lokulala eliphezulu
Inhliziyo yekamelo lokulala kanye nendawo oyintandokazi yabantu abaningi - umbhede wenziwa ngezihumusho eziningana:
ngenqubo yokuphakamisa i-mattress.
Ikamelo lokulala elincane le-hi-tech lingazenza ngezindawo ezincane ezinikezwe ukulungiswa kwezinto uma umbhede uhlonyelwe izidwebi ezakhelwe ngaphakathi zokugcina izigqoke, amathawula namashidi okulala angasetshenziswanga. Ezingxenyeni ezincane, okunye okuhle kakhulu kumbhede omile kuyindawo yokuphakama, ekhonza ukukhulula isikhala.
Itafula elingaphansi kwekamelo eliphezulu lokulala
Uma ulala phansi udinga isikhala esincane ukuze ukwazi ukubeka incwadi noma izibuko. Ngalesi sizathu, kukhona itafula lombhede. Amakamelo okulala ahlanzekile futhi amahle aphezulu, atholakalayo ngendlela evamile, akuvumela ukuba ukhethe ukuguqulwa okuhambisana nezifiso zakho nezidingo zakho. Amatafula angaphansi kombhede abadwebi angcono ukukwazi ukugcina izinto ezincane ongazithola ngenkathi uhlala embhedeni.
I-TV ekamelweni lokulala ngesitayela esiphakeme
Ososayensi behluke ngombono, ngabe i-TV iyasiza ukulala noma ukuvimbela. Lo mbuzo, wonke umuntu unquma eyedwa. Kunoma yikuphi, i-TV akufanele ibe isikhungo ekamelweni lakho, futhi kudingekile ukubukela ngezikhathi ezithile. Ukuze ulondoloze isikhala, ungafaka isikrini odongeni. Khumbula ukuthi igumbi lokulala kumele libe yindawo ethule, futhi ifenisha enkulu ukuhlala embhedeni.
Amakamelo okulala angama-hi-tech amnandi ukuphumula abantu abanomqondo owodwa wengqondo, kuyilapho abanye bekhetha ukulala e-grey noma emkhatsini wamnyama, kepha kubaluleke kakhulu ukuba nesikhathi sokuthula ngaphambi kokulala. Ukubuka i-TV ngaphambi kokulala kungase kubangele ukwedlulela ngokweqile, okuzophazamisa ikhwalithi yesikhathi esichitha embhedeni.
Ikamelo lokulala eliphezulu liye lahlala endaweni eqinile emakhaya nasezindlini zabathandi abancane ukunikeza izindlela zabo zokuhlela indawo yokulala. Ikhwalithi yefenisha, izakhiwo kanye nezinto zokuqedela izakhiwo zithembele ekuphumeleleni kwamuva emkhakheni wezobuchwepheshe ekukhiqizeni. Ikamelo lokulala lizokwazi kanjani ukuhambisana nendawo ethile yokuhlala yindaba yokunakekelwa kwabanikazi.
Ukuthuka okwenzelwe izitebhisi
Izinketho zokubeka amathayili endlini yokugezela - ukuklama
I-tile - idayimane
Ukuhlobisa izimbiza zezimbali ngezandla zakho
I-Fashionable Wallpaper yekamelo lokulala 2014
Ukubhekana nendlu - iyiphi into engcono?
Yini ehluma izinyoni ze-cherry?
Ukudla okungcono kakhulu, ngokusho kochwepheshe
Amabhola amhlophe - izitayela ze-fashion 2016
Izibhamu ezivela emgqumeni wesinkwa
Akalifa - amathiphu okunakekela imbali engavamile
Isibani ngezandla zakho
Abakhohlisa abangu-13 phakathi kwabantu abadumile
UNicole Scherzinger ubonise isibalo esincane ngesikhathi eholidini eMykonos
I-osteoarthritis - izimpawu
Amakhibhodi wegeyimu ngokukhanyisa
Ithebula elizungezile ekhishini
Igama elithi Olesya lisho ukuthini?
Rom kusuka eTrinidad